Yini ongayibona eNorway: izindawo ezinhle kakhulu namadolobha amahle | Ukuhamba kwe-Absolut
Luis Martinez | | ENorway
Ukuchaza okufanele sikubone eNorway kukhuluma ngakho I-Aurora borealis, omkhulu fjords, uyigugu Imizi yaseNordic y amadolobhana alahlekile ngokugcwele I-Arctic Circle. Kepha futhi kusuka emazweni asendulo anabantu abadumile vikings kanye namasiko asendulo ezweni lesimanje.
Kutholakala eNhlonhlweni YaseScandinavia, njenge I-Suecia o Finlandia, futhi ngamakhilomitha-skwele angaphezu kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngobukhulu, iNorway igezwa yi ulwandle olwandle futhi ihlukaniswe izifunda eziyishumi nanye zokuphatha o AmaFylkers lokho ngakunye kukuhle kunokwedlule. Uma ufuna ukuthola ukuthi yini ongayibona eNorway, sikumema ukuthi usilandele.
1 Yini ongayibona eNorway: amadolobha nemvelo
1.1 Oslo, ubuKristu basendulo
1.2 I-Tromso, izwe lamalambu aseNyakatho
1.3 IBergen, idolobha lezindlu zamapulangwe
1.4 I-Alesund, enye indawo yokuqala eya emachwebeni ukubona eNorway
1.5 Trondheim noma yini ongayibona enhliziyweni yeNorway
1.6 Iziqhingi zaseSvalvard, ezisendleleni eya eNyakatho Pole
1.7 Kristiansand, emabhishi ukubona eNorway
1.8 I-Eastern Norway: izigodi ezimangalisayo nezintaba
2 Kunini kangcono ukuya eNorway
3 Ungafika kanjani eNorway
Yini ongayibona eNorway: amadolobha nemvelo
Sizoqala uhambo lwethu eNorway enhlokodolobha, Oslo, etholakala eningizimu yezwe bese uqhubeka nohambo lwakho udabula izifunda ezisenyakatho, empumalanga nasentshonalanga, zonke ezikunikeza izikhumbuzo namathafa amahle.
Oslo, ubuKristu basendulo
Ibizwa ngokuthi yiCristianía kuze kube yi-1897, enezakhamuzi ezicishe zibe ngamakhulu ayisikhombisa ayisikhombisa idolobha lesithathu eScandinavia ngemuva kweCopenhagen neStockholm. Isebenze njengenhlokodolobha yezwe kusukela ngo-1314, ngenkathi inkosi IHaakon V wasungula inkantolo lapho.
Itshe lesikhumbuzo eliyisakhiwo sodumo kakhulu edolobheni liyamangalisa Inqaba yase-Akershus, eyakhiwe eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa edlule yize yalungiswa kakhulu ngekhulu le-XNUMX ngokuya ngesitayela se-Renaissance. Kamuva, kwanezelwa nezinye izakhiwo. Kwesinye salezo zakhiwo ungavakashela i- INorway Resistance Museum, oqoqa umlando wokuphikisana kwezwe nokuqashwa kwamaJalimane phakathi kuka-1940 no-1945.
Okunye ukwakhiwa komphakathi esikweluleka ukuthi ukuvakashele e-Oslo yizona ezibabazekayo I-Royal Palace, isitayela se-neoclassical; ukwakhiwa kwe Ukujezisa o IPhalamende leNorway; ukuteleka Iholide laseDolobheni, lapho kuklonyeliswa khona iNobel Peace Prize, kanye Ipaki yaseVietland, futhi esebenza njengombukiso waphakade wezithombe zomculi ozinike igama, UGustav Vigeland.
Isakhiwo sePhalamende laseNorway
Mayelana nokwakhiwa kwezenkolo, sincoma ukuthi ubone ifayela le- Amasonto amakhulu oMsindisi wase-Oslo noSanta OlafLesi sakamuva singesikhulu kunazo zonke ezweni lonke futhi sinesitayela se-neo-Gothic; kanye ne Gamle Aker namasonto amaZiqu-zintathu, eyokuqala, iRomanesque, okuyisakhiwo esidala kunawo wonke enhlokodolobha.
Ekugcineni, akufanele ushiye i-Oslo ngaphandle kokubona iminyuziyamu efana naleyo enikelwe kumdwebi Edvard Munch futhi abanelukuluku kakhulu le- UKon-Tiki, mayelana nesivakashi saseNorway UThor Heyerdhalkanye ne Imikhumbi yamaViking. Ngaphandle kokukhohlwa Abantu baseNorway, emoyeni ovulekile futhi lokho kukhombisa izindlu ezivela kulo lonke izwe kanye namasiko namasiko ezakhamuzi zakhona.
I-Tromso, izwe lamalambu aseNyakatho
Sigxumela enyakatho yeNorway ukubona iTromso, esendaweni yesifunda (engeyona eyepolitiki) ILapland. Ithatha igama layo kusuka ku- isiqhingi se-tromsoya, lapho kutholakala khona isikhungo sedolobha.
Kuyo ungabona amathempeli afana ne- isonto lombhishobhi lasendulo eyakhiwe ngo-1861 neminyuziyamu efana naleyo ye- I-Tromso University, lapho ungafunda khona ngomlando namasiko we bantu bakithi noma i-Lapp futhi eqedwa ngokubabazekayo nokuhlukile Ingadi Yezitshalo Yase-Arctic-Alpine. Kodwa mhlawumbe lena yesimanje iyamangalisa ngokwengeziwe i-arctic cathedral, ukwakhiwa kuka-1965 okunewindi elikhulu kunawo wonke eYurophu. Futhi, iTromso idume ngempilo yayo yasemadolobheni kanye nangemikhosi eminingi yomculo eyihlelayo.
Kodwa-ke, okuhle kakhulu kwalesi sifunda kutholakala ezindaweni ezikude kakhulu zedolobha. Lezi izindawo ezinhle kakhulu ongazibona ezinhle I-Aurora borealis, ucingo "phakathi kwamabili iLanga" futhi futhi nge ukubuka imikhomo. Ungafinyelela iphuzu elisenyakatho neYurophu ENyakatho Kapa, bukela izinyoni ku Inhlonhlo yaseVaranger futhi uchithe ubusuku ehhotela leqhwa e I-Kirkenes.
Isonto lombhishobhi lase-Arctic
IBergen, idolobha lezindlu zamapulangwe
Khuluma ngalokho ongakubona eNorway ungasho ukubabazeka kwayo fjords bekungeke kuthethelelwe. Futhi iBergen iyisango lokuya kokunye okuhlaba umxhwele njenge Sogne, kubhekwe njengokude kakhulu nokujule kakhulu eNorway, noma lokho kwe Hardanger, iphi i Ithafa laseTrolltunga.
Ukusuka eBergen ungahamba futhi ngesitimela uye edolobhaneni lase I-Flam ukwenza omunye wemizila yesitimela enhle kunazo zonke emhlabeni ngokuba yingxenye yangaphakathi yefjord ye I-Aurland futhi niwele imifula ejulile enezimpophoma ezinhle kakhulu.
Kepha futhi unezinto ezithokozisayo ongazibona ngokwakho Bergen. Isibonelo, izindawo ezinhle ze- UBryggen futhi of I-Strandsiden, nezindlu zayo zamapulangwe ezidwetshiwe ngemibala ejabulisayo. Noma vakashela amahle Isikwele iBlue Stone, iphi i isonto lesan juan. Noma, uma sikhuluma ngamathempeli, i- Isonto laseSanta Maria, isakhiwo esidala kunazo zonke edolobheni njengoba sasivela ngekhulu le-XNUMX. Futhi i- Isonto likaSanta Olaf, kamuva kancane kakhulu.
Ekugcineni, awunakushiya idolobha ngaphandle kokukhuphukela ku- umbono kaFloyen, efinyelelwa yi-Floibanen funicular futhi lapho unemibono khona ngokungajwayelekile ngeBergen uqobo kanye nangefjords.
I-Alesund, enye indawo yokuqala eya emachwebeni ukubona eNorway
Ngenkathi iBergen iyindawo enhle yokuqala ukubona ama-fjords, i-Alesund ingcono kakhulu ngokuvakashela okumangalisa kakhulu kuyo yonke iNorway. Imayelana ne- geiranger fjord, efakwe ohlwini njenge- Amagugu Emhlaba, kodwa kukhona nezinye eziningi.
Ngakolunye uhlangothi, lesi sifunda sihle uma uthanda i- izintaba ngoba kuyo Andalsnes, kubhekwe njengenhlokodolobha yaseNorway yalo msebenzi wezemidlalo futhi ongayifinyelela ngokuthatha omunye umzila wesitimela omuhle.
Kepha futhi sikweluleka ukuthi ume kulokhu okungenhla Alesund, itshe eliyigugu elaziwa ngokuthi «Idolobha lase-Art Nouveau» ngenani elikhulu lezakhiwo zalesi sitayela esihle sokwakha esinalo.
Trondheim noma yini ongayibona enhliziyweni yeNorway
Idolobha elibaluleke kakhulu esifundeni se I-Trondelag, leli dolobha laziwa njenge "Izwe lokunambitheka kweNordic" ngenxa yenani elikhulu lezindawo zokudlela elinazo, ezinye zine- Inkanyezi yaseMichelin. Kepha, ngaphezu kwalokho, kwakuyinhloko-dolobha yezenkolo eNorway phakathi neNkathi Ephakathi sibonga ukubabazeka kwayo Isonto lombhishobhi laseNidaros, isakhiwo esinesisekelo samaGothic-Elizabethan, nase Isigodlo sika-Archbishop, okuyinto yokwakhiwa komphakathi endala kunawo wonke amazwe aseNordic.
Ngaphezu kwalokho, iTrondheim iyi- Inyuvesi City amandla abo esayensi, ngasendleleni, asesakhiweni esihle. Futhi futhi kwakuyisiphephelo esibalulekile samasosha, njengoba kufakazelwa ngu Izinqaba zaseKristiansen naseMunkholmen Island.
Kepha isifunda iTrondelag sinezinye izinto ezikhangayo esikweluleka ukuthi uzivakashele. Yilokho okwenzeka edolobheni lezimayini lase URorosyini Amagugu Emhlaba nokuthi, nezindlu zayo zamapulangwe nezimayini zethusi, kuzokwenza ukuthi ubuyele emuva ngesikhathi. Futhi lokho kwe Umzila Wegolide Inderoy, okuthi, naphezu kwegama laso, akuhlangene nakancane nezimbiwa phansi eziyigugu, kodwa namathafa amahle kakhulu angeke akushiye ungenandaba.
Iziqhingi zaseSvalvard, ezisendleleni eya eNyakatho Pole
Le ndawo yeziqhingi itholakala maphakathi ne- I-Arctic Ocean. Akufanele kukumangaze-ke ukuthi imisebenzi emikhulu ongayenza lapho ugibela endaweni ye- inja isihlibhi, bukela I-Aurora borealis noma vakashela imihume yeqhwa. Ngaphezu kwalokho, endaweni ebaluleke kakhulu, Longyearbyen, uzokwazi ukwazisa indawo enhle futhi, njengelukuluku lokwazi, wazi ngayo IYunivesithi, okuyindawo esenyakatho kakhulu emhlabeni.
Kristiansand, emabhishi ukubona eNorway
Eningizimu yezwe indawo yamaholide yaseNorway. Kunengqondo, ngoba inamahora amaningi okukhanya kwelanga kunanoma iyiphi enye indawo esizweni futhi nayo amabhishi amahle. Kepha futhi unamadolobhana amancane wokudoba ajwayelekile, anezindlu zawo zamapulangwe amhlophe, njenge Ingozi, I-Grimstad o I-Arendal. Futhi, uma uthuthela ku- Isigodi saseSetsdalNgaphezu kwamasimu amahle nezakhiwo ezifulelwe ngotshani, uzofunda ngamasiko amadala kunawo wonke eNorway.
Kepha idolobha elibaluleke kakhulu esifundeni yi Kristiansand, banebhishi elithokomele. Kepha ngaphezu kwakho konke IPosebyen Idolobha Elidala, okuwukuphela kwengxenye yedolobha eyasinda emlilweni omkhulu owaqubuka kuwo ngo-1892. Kuyintokozo ukuhamba emigwaqweni yayo ihlotshiswe ngezihlahla futhi ifreyimu izindlu ezindala zamapulangwe.
Futhi, uma uhamba nezingane zakho, eKristiansand une I-Dyreparken, ipaki yokuzijabulisa kanye ne-zoo ozoyithanda. Ngokwakho ingxenye, uma uthanda i-gastronomy, eLindesnes ungadla ku Ngaphansi, indawo yokudlela enkulu kunazo zonke engaphansi komhlaba futhi ene- Inkanyezi yaseMichelin.
I-Eastern Norway: izigodi ezimangalisayo nezintaba
Ekugcineni, sikusa empumalanga yeNorway ukuze ubone amapaki kazwelonke ahlaba umxhwele kakhulu ezweni. Okuvelele phakathi kwabo lokho Dovrefjellkwe UJotunheimen futhi enye URodane. Ungabhekabheka ifayela le- isiteshi se-telemark bese uhamba izintaba eduze kwe- Isigodi saseGudbrandsdalen.
Kepha, uma uthanda ukushibilika eqhweni, uzolahlekelwa ukuthi, ezweni laseNordic, sizokhuluma nawe ngeziteshi zokuzijwayeza lo mdlalo. Okunye kokuhamba phambili, njengaleyo ye- UGeilo, I-Hemsedal o Zama, zitholakala esifundeni esisempumalanga yeNorway.
Kunini kangcono ukuya eNorway
Akudingeki sikutshele ukuthi iNorway ibanda kakhulu. Isikhathi sasehlobo esifudumele kakhulu senzeka, njengoba sishilo eningizimu yezwe, lapho kukhona khona futhi amahora amaningi okukhanya kwelanga. Ukuziphatha kwalokhu kungenye yezinto ezikhethekile eNorway. Njengakwamanye amazwe akule ndawo, phakathi kokuphela kukaNovemba noJanuwari kunzima ukubona ilanga (lutho ezifundeni ezisenyakatho). Kodwa-ke, kusukela ekupheleni kukaMeyi kuze kube sekupheleni kukaJulayi, kubeka nje, kunabambalwa amahora angamashumi amabili okukhanya ngosuku. Ngakho-ke, iNorway yaziwa ngegama elisankondlo lika "Izwe Lelanga Lamabili Amabili".
Ngazo zonke lezi zizathu, asikwazi ukuncoma isikhathi sokuthi uvakashele izwe laseNordic, ngoba nje kuncike kulokho ofuna ukukwenza. Isibonelo, uma ufuna ukubona iLights Lights, kufanele ungene ubusika. Kepha, uma okufunayo ukwenza ezokuvakasha, sikucebisa ukuthi uhambe phakathi kukaMeyi noSepthemba, lapho isimo sezulu simnene nezinsuku zide kakhulu, njengoba sishilo.
Ungafika kanjani eNorway
Ukuya ezweni laseNordic kulula kakhulu. Isikhumulo sezindiza sayo esikhulu yi Oslo, kodwa kukhona namanye amazwe nakwamanye amadolobha afana Bergen, eTromsø o Kristiansand. Futhi, ungandiza ukusuka kokugcina uye ezindaweni ezikude kakhulu njenge iziqhingi lofoten, the ISvalvard futhi ngisho ENyakatho Kapa.
Idolobha lezimayini zeRoros
Ungafika naseNorway ngesitimela. Oslo ixhunywe ngesitimela ukuze I-Copenhague, I-Stockholm o IGothenburg futhi, kusuka kulokhu, kulo lonke elaseYurophu. Kungashiwo okufanayo ngebhasi futhi, uma ukhetha isikebhe, kukhona nolayini abavela Alemania, Denmark y I-Suecia emadolobheni ahlukahlukene eNorway.
Uma usungene ezweni, sikucebisa ukuthi udabule phakathi kulo i-tren. Ine eminye yemizila yesitimela emangalisa kakhulu emhlabeni. Phakathi kwabo, lokho kwe I-Nordland; lokho kwe Bergen, enqamula ubuhle bemvelo bezintaba; lokho kwe I-Flam, okuyinto esesikutshele yona, noma leyo IDovre, enqamula amapaki emvelo anamathafa amnandi aneqhwa.
Ekuphetheni, uma ubuzibuza ukuthi uzobona ini eNorway, usuvele uyazi ukuthi ikunikeza okungaphezulu kakhulu kwezibani zaseNyakatho. Kuyigugu amadolobha anomlando omningi nezikhumbuzo, ebeka ubuhle bezintaba futhi ngisho amabhishi eningizimu yezwe. Awufuni ukwazi iNorway?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yini ongayibona eNorway